Ihe 4 kpatara itinye ego na ezigbo onye ọbịa | ECommerce ozi ọma
Ihe 4 kpatara itinye ego na ezigbo onye ọbịa
Taa enwere ọtụtụ kpam kpam ọrụ nnabata n'efu. Ọ bụ ihe nkịtị na ọ bụrụ na anyị na-amalite ụwa nke kọmputa electronic anyị dọọrọ mmasị hoster nke ụdị a. Agbanyeghị, enwere ọtụtụ uru ma ọ bụrụ na anyị kpebie itinye ego na ezigbo sava.
1 Ebumnuche ga - eme ka ị kpebie itinye ego na Hoster iji meziwanye azụmahịa gị
1.1 Nchịkọta zuru oke na onyonyo nke ibe gị:
1.2 More nche usoro:
1.3 Nweta nkwado na enyemaka nke onwe:
1.4 Buru nke oma na mgbasa ozi nke na adighi eweputa ego:
Ebumnuche ga - eme ka ị kpebie itinye ego na Hoster iji meziwanye azụmahịa gị
Nchịkọta zuru oke na onyonyo nke ibe gị:
Mgbe ị na-akwụ ụgwọ ọrụ ị na-akwụ ụgwọ, ị ga-echezọ banyere mgbochi ndị ahụ ndị nnabata n'efu ha na-amanye. A ga-ahaziri ngalaba gị ahaziri iche ma nwee ike iji ogo nke agba ị họọrọ. Ọ bụrụ na ịmaghị otu esi eme mmemme, a ga-enwe ndebiri ga-eme ka ọrụ gị dị mfe azụmahịa weebụ kpamkpam na ịchọrọ.
More nche usoro:
na sava weebụ akwụ ụgwọ gụnyere nhọrọ ịgbakwunye usoro nche dị ka SSL ma ọ bụ ọnụ ụzọ ịkwụ ụgwọ, na-eme ka azụmahịa gị niile nwee nchebe.
Nweta nkwado na enyemaka nke onwe:
Na ụlọ ọrụ nnabata Ha nwere mmasị na gị na ha nọrọ, ọ bụ ya mere ha ga-eji kwado ọrụ gị. Ọ bụrụ na nsogbu bilitere na ibe gị, a ga-enwe otu ndị ọkachamara n'okwu a na-achọ inye gị azịza n'ọnọdụ ọ bụla nwere ike ibilite.
Buru nke oma na mgbasa ozi nke na adighi eweputa ego:
na ndị nnabata n'efu Ha na-enweta ego ha site na itinye mgbasa ozi na ibe gị nke ị na-arịọghị na nke ị na-anaghị enweta ego. Ndị na-akwụ ụgwọ ụgwọ Ha ekwesighi itinye mgbasa ozi na ibe gị ma ọ bụ naanị gị na-ekpebi ma ị ga-etinye mgbasa ozi ma ọ bụ na ọ bụghị, n'ezie, ịnweta uru n'onwe gị.
Obi abụọ adịghị ya, yana uru ndị a niile, anyị ga-enwe ike ịnye ndị ahịa anyị ahịa zuru oke ma dị ụtọ. N'ụzọ dị otú a, anyị ga-ahụ ihe ịga nke ọma na uto nke azụmahịa anyị.
Pathzọ zuru ezu na edemede: ECommerce ozi ọma » eCommerce » mba » Ihe 4 kpatara itinye ego na ezigbo onye ọbịa
Esi emeghachi omume na mwakpo weebụ na ibe anyị
Ahịa anụ ahụ na ụdị nke mebere